Guddoomiye Cabdi Xaashi iyo wafdigiisa oo maanta magaalada Seoul Shir uga qayb galaya – Kalfadhi
February 7, 2019 Kalfadhi
Wafdigii uu hogaaminayay Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ee Shalay gaaray magaalada Seoul ee Caasimadda Kuuriyada Koofureed ayaa maanta halkaasi uga qayb galaya Shir looga hadlayo Nabadda Aduunka oo sanadkiiba mar la qabto. Sanadkaan waa markii ugu horeysay oo ay Soomaaliya ka qayb gasho sanadihii ugu dambeeyay, waxaana lagu wadaa in uu khudbad ka jeediyo Guddoomiyaha Aqalka Sare ee BFS.
Shirkaan waxaa isugu imaanaya Dowlado, hey’ado iyo Celmi baarayaal kuwaas oo soo bandhigi doono caqabadaha ka jira Aduunyada, gaar ahaan Nabadda iyo Dimuqraadiyadda. Soomaaliya waxay kamid tahay wadamada ay ka jiraan dhibaatooyinka Amni darrada, sidoo kale waxaa Soomaaliya ka jira Dimuqraadiyad aan wali gaarin heerkii loo baahnaa markii loo eego wadamada kale ee ku horumaray Dimuqraadiyadda.
Kulanka ayaa socon doona 7da ilaa 11ka Bishaan, markii uu soo dhamaado ayaa lagu wadaa in laga soo saaro War-murtiyeed ku saabsan waxyaabaha looga wada hadlay iyo natiijada ka soo baxday Shirkaasi. Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in ay faa’iidooyin badan ku qabto Shirkaan maadaama ay ka jirto dhibaatooyin Amni darro oo xoog leh.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Madaxweynaha Jabuuti oo kawada hadlay Arimaha Soomaaliya